Ukubuyekezwa Kwesifudumezi Esisheshayo Samanzi Esindisa Amandla sikaMicoe "Micro PRO
Ikhaya / Blog / Ukubuyekezwa Kwe-Heater Water Heating Balcony Heating Water Heater “yakwaMicoe Esheshayo”
Ukubuyekezwa Kwe-Heater Water Heating Balcony Heating Water Heater “yakwaMicoe Esheshayo”
2021 / 08 / 21 UkwahlukanisaBlog 1715 0
Ehlobo elinamafutha, ukusho iphunga lezithukuthuku, kufanele uthathe ishawa eqabulayo! Uma ufuna ukugeza okubuhlungu, udinga isifudumezi samanzi esisezingeni eliphakeme ngokushisa okusheshayo, ukushisa okungaguquki, nevolumu enkulu yamanzi. Namuhla, ngikuphathele okugeza okuncono kunakho konke okuthandayo - I-Micoe esheshayo yokushisa i-balcony yokonga amanzi heater "I-Smart Pro" .Namuhla, ngikulethele okugeza okuhle kakhulu - iMicoe esheshayo yokushisa ibhalkhoni yokonga amanzi heater "Smart Pro". Namuhla, ngikulethele okugeza okuhle kunakho konke okuthandayo - iMicoe esheshayo yokushisa kuvulandi yokonga amanzi heater “Smart Pro”. I-Smart Pro ene-photoelectric dual-energy ingakunikeza ngamanzi ashisayo usuku lonke, ngakho-ke ungageza nganoma yisiphi isikhathi? Ake sibheke!
IMicoe esheshayo yokushisa kuvulandi yokonga amanzi heater “Smart Pro”
Ngokushisa kwendabuko kagesi kagesi, udinga ukulinda isikhashana. Isifudumezi samanzi selanga sesaba izinsuku ezinamafu. Singakuthola kanjani ukugeza okusheshayo nokuqabulayo? I-Smart Pro isinikeza impendulo. Inokusebenza okulandelayo: i-photoelectric dual-energy, izinga lokushisa elingaguquguquki nokunethezeka, amanzi ashisayo ngokushesha nje lapho uvula, namandla athe xaxa ngokuphindwe kasishiyagalombili (izinga lokushisa lamanzi ompompi kudingeka ligcinwe ngaphezu kwama-24 ℃). Ungageza noma kunini lapho ufuna kunoma yisiphi isimo sezulu!
Ine-panel yelanga eyisicaba enefilimu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-titanium. Inomngcele wangaphandle oyingcezu eyodwa. Inengqimba yolwelwesi oluyisicaba enesilinganiso sokumunca ukushisa esingu-94% sokuqoqwa kokushisa okusebenzayo ngaphandle kokuchitha yonke iminithi yamandla okushisa! Futhi ngaphakathi, i-Smart Pro isebenzisa amapayipi wokugeleza athambekele ku-8 kanye nedizayini enamalungelo obunikazi ye-D-pipe. Amapayipi ayo afakwa ngokuvundlile, angathuthukisa ukusebenza kokushisa kokushisa ngama-5% futhi aqoqe ukushisa ngamandla amakhulu. Futhi lapho isimo sezulu singesihle, sizovula ngokuzenzakalela ukushisa kagesi. Ine-doubleelectric-energy, engenza amanzi ashisayo anele. Lokhu kunganelisa isidingo sakho sokugeza ngokushintshana okuqhubekayo nomndeni wakho.
Lapho ugeza, singahle sihlangane nenkinga yokuthi i-heater yamanzi ngokusobala ivuliwe, kepha uma ompompi uvuliwe, kusamele ukhiphe amanzi abandayo isikhathi esithile ngaphambi kokuba kube khona amanzi ashisayo. Kulokhu, ungayixazulula kanjani? IMicoe's Smart Pro isebenzisa ubuchwepheshe bamanzi abandayo bokuqala embonini. Futhi lapho isimo sezulu singesihle, sizovula ngokuzenzakalela ukushisa kagesi. Ine-doubleelectric-energy, engenza amanzi ashisayo anele. Lokhu kungahlangabezana nezidingo zakho zokugeza okuqhubekayo nomndeni wakho.
Iphampu yokusakaza nemodyuli yokushisa esheshayo
Ngemuva kokuhlolwa kwangempela, lapho umsebenzi wokujikeleza kwamanzi abandayo uvuliwe, izinga lokushisa kwamanzi lisethwe kuma-42 ℃. Ngemuva kokuvula ishawa cishe imizuzwana emi-4, izinga lokushisa lamanzi lifinyelele kuma-41.8 ℃. Awudingi ukulinda uma ufuna ishawa eshisayo. Uma ungavuli umsebenzi wokujikeleza kwamanzi abandayo onguziro, izinga lokushisa lokuqala leshawa lilinganiselwa ku-24 ℃ kuphela. Uma ifuthumele ku-41.8 ℃, udinga ukulinda cishe imizuzwana engama-40.
Ngaphezu kwalokho, iMicoe's Smart Pro nayo inobuchwepheshe obumnyama obufanayo bamandla aphindwe kasishiyagalombili. Ingagcwalisa ukushisa nganoma yisiphi isikhathi lapho usebenzisa. Iphinde yahlanganiswa nomthamo omkhulu wamalitha angama-8 we-liner yangaphakathi, ethola ukukhushulwa kwamandla izikhathi eziyi-80. Inikeza cishe amalitha angama-8 wamanzi ashisayo ngokuqhubekayo! Ngisho noma wonke umndeni ushintshana ngokugeza, inani elifanayo lamanzi ashisayo lingajatshulelwa kalula!
Ukugeza kahle, izinga lokushisa kwamanzi kufanele lizinze ngokwanele. Ukuze siqinisekise ukusebenza kokushisa kwayo njalo, sibeka izinga lokushisa kwe-heater yamanzi ku-44 ℃. Hlola izinga lokushisa kwamanzi njalo ngemizuzu emibili. Ngemuva kokuhlolwa okuyisihlanu, sithola idatha ekhonjisiwe esithombeni (ijika lokushisa lokushisa kwamanzi). Njengoba ukwazi ukubona, ukushintsha kwamazinga okushisa kwamanzi ngaphakathi kwe- ± 2 ℃, ukusebenza okuhle kakhulu.
Ibizwe njengokushisa okusheshayo, ingabe ikwazi ukufudumeza ngokushesha? Empeleni siyayihlola nge-thermometer! Njengoba ukwazi ukubona eshadini elingezansi, vula isifudumezi samanzi bese usetha izinga lokushisa kwamanzi libe ngu-40 ℃. Ngemuva kwalokho, izinga lokushisa lamanzi lifinyelele ku-39.2 ℃ cishe kumasekhondi ama-3 wokuvula ishawa, okwanele ukuhlangabezana nezidingo zokugeza cishe ngaphandle kokulinda.
Okubhaliwe: Isivivinyo sokushisa esisheshayo
Umphumela wokushisa kaMicoe Smart Pro uhlangabezana ngokugcwele nezidingo zethu, kuthiwani ngokulawulwa kwawo? Ngokomzimba, inesikrini sokuthinta esihlakaniphile esikuvumela ukuthi ulungise kalula ukushisa okuhleliwe futhi ubuke izinga lokushisa nolunye ulwazi ngezinkinobho.
Ngokufanayo, ungayilawula futhi ukude ngezwi nge-Tmall Genie noma ngokulanda uhlelo lokusebenza lweselula. Lokhu kulula kakhulu! Lapho abazali bengazi ukuthi bangayilawula kanjani i-heater yamanzi, bangavula isifudumezi samanzi ngokukhuluma noTmall Genie. Lokhu kwenza kube lula ngabazali bakho ukugeza eshaweni esishisayo. Futhi ngemuva kokuba nosuku olumatasa, ungasebenzisa futhi ifoni yakho ukulawula isifudumezi samanzi ukude kusengaphambili lapho usiya ekhaya. Uma ufika ekhaya, ungageza, bekungeke yini kube kuhle?
Kukonke, iMicoe esheshayo yokushisa kuvulandi yokonga amanzi heater “I-Smart Pro” yehlula ukushiyeka kokushisa kwama-heaters wendabuko kagesi noma welanga ngesici sayo sokushisa amandla kagesi amabili. Ifinyelela ukushisa okusheshayo nokushisa okungaguquguquki. Umthamo wayo omkhulu wamalitha angama-80 nezindlela ezahlukahlukene zokulawula nakho kwenza kube lula ukuwusebenzisa nokwenza kube lula ukugeza. Yebo, ukubuyekezwa kwanamuhla sekukhona, ngiqala ngokugeza!
Edlule :: Idatha Yemakethe Yesigamu Sokuqala Segumbi Lokugeza Elicwengisisiwe Iyakhishwa! Indlu yangasese kaKohler, Umcengezi, Ukugeza Kwabathathu Ababekwe Kuqala! Olandelayo: IHuida Sanitary Ware: Imali engenayo Engxenyeni Yokuqala Yonyaka Bekungama-Yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.743, Ukukhuphuka kwama-32.38% Ngonyaka Ngonyaka